theZOMI: Burma News International - March 11, 2013
Burma News International - March 11, 2013
Myanmar's Ministry of Mines will begin tests for metal mineral exploration in Chin State, the country's most impoverished region, the minister responsible has told Mizzima.
Villagers in Tenasserim Division want the local Karen National Union to revoke permission given toacoalmine that villagers claim is polluting their waterways and damaging their plantations.
Nasaka personnel forced villagers to attendameeting recently where they laid down the law about what and what not they are allowed to do. Over 60 villagers, including village heads, were made to listen toalong list of specifications dictated by the Burma border guard force from area7in southern Maungdaw, Arakan state.
Burma army's Kachin offensive continues despite President's claims, says KNO
The Kachin National Organization (KNO), the largest exiled Kachin political organization, issuedastatement last Friday that strongly condemned President Thein Sein's position that there isn’t any more fighting in Burma. Throughout his European trip, which wrapped up last Friday, Thein Sein repeated the government line that armed conflict in the country had ended despite mounting evidence that fighting in Kachin state continues unabated.
ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လုပ်သည့်စာရင်း ကွာဟနေဟု MRPWG အဖွဲ့ပြော
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအား One Stop Service ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လုပ်ပေးသည့် လုပ်ငန်း စတင်နေသော်လည်း စာရင်းများ ကွာဟမှု ရှိနေကြောင်း MRPWG (Migrant Right Promotion Working Group) အဖွဲ့က ပြောဆိုလိုက်သည်။
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းစစ်ရေးစွမ်းရည် မြှင့်တင်ရန် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင် စစ်သင်္ဘောများဖြင့် ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင်ရန်နှင့့်် ပူးတွဲကင်းလှည့်မှုများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မတ် ၁၁ ရက်နေ့ထုတ် Times of India သတင်းစာက ဖော်ပြသည်။
တလအတွင်း နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှ ရော်ဘာစုံ တန်ချိန် ၈,၀၀၀ ကျော် တင်ပို့ရောင်းချခဲ့
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ တလတာအတွင်း နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းမှတဆင့် ရော်ဘာ အဆင့်စုံ တန်ချိန် ၈,၀၀၀ ကျော် တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ကြောင်း ရော်ဘာပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များထံက ဆိုသည်။
ဟံသာဝတီ လေဆိပ် စီမံကိန်းအား ကိုရီးယား ပို့ကုန်-သွင်းကုန်ဘဏ် စိတ်ဝင်စား
ပဲခူးတိုင်း အတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့နှင့်လည်း နီးသောနေရာတွင် ဆက်လက် တည်ဆောက်မည့် ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သစ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့် Incheon International Airport Corporation (IIAC) အား ကိုရီးယား ပို့ကုန်-သွင်းကုန်ဘဏ်က ကူညီမည်ဟု တောင်ကိုရီးယား အခြေစိုက် The Korea Herald (ကိုရီးယား သံတော်ဆင့်) သတင်းစာက မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့က ရေးသားထားသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ပါရဂူဘွဲ့ရ ရခိုင်ရဟန်းတော်အား ရန်ကုန်တွင် ဂုဏ်ပြုပူဇော်
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကေလဏိယတက္ကသိုလ်၊ ဘွဲ့လွန်ပါဠိနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာပညာသင်ကျောင်းမှ ၂၀၁၂ ခု နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိခဲ့သူ ဒေါက်တာအသျှင်ဉာဏုတ္တရ အား ဂုဏ်ပြု ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား တစ်ခုကို ရန်ကုန်မြို့တွင် မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့က ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ကျင့်သုံးခြင်းနှင့် ရခိုင်တို့၏ ကံကြမ္မာ” စာတမ်းကို သြစတြေးလျ အမျိုးသား တက္ကသိုလ်တွင် ဖတ်ကြားမည်
သြစတြေးလျ နိုင်ငံ ကင်ဘရာ အမျိုးသား တက္ကသိုလ်တွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆိုင်သော ညီလာခံတွင် “ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းနှင့် ရခိုင်တို့၏ ကံကြမ္မာ” စာတမ်းကို ဖတ်ကြား သွားမည်ဟု သိရသည်။